Cat si anya tourmaline si Brazil - chatoyancy tourmaline - video
Anya nlegharị anya nke Cat
Tags Cat anya, Tourmaline
Zụta okike tourmaline n’ime ụlọ ahịa anyị
Tourmaline bụ mineral silicate crystalline. Ngwakọta dị iche iche dị ka aluminom, ígwè, magnesium, sodium, lithium, ma ọ bụ potassium. Ọ bụ nkume dị oké ọnụ ahịa. N'otu aka ahụ, ezinụlọ ndị ọzọ dị egwu, tourmaline na-abakwa n'ụdị dị iche iche.
Tourmaline bụ mgbanaka cyclosilicate nke isii na-enwe usoro kristal trigonal. Ọ na-adị ogologo oge, nke na-eme ka ọkpụkpụ kristal na-agbanwe agbanwe, nke na-emekarị ka ọ na-agafe n'ofe, mgbe mgbe ọ na-ebugharị ihu. Ọzọkwa, ụdị nke nkwụsị na njedebe nke kristal bụ mgbe ụfọdụ, nke a na-akpọ hemimorphism.
Ọzọkwa, obere kristal prismatic na-adịkarị na ọka mara mma. A na-akpọ ya aplite, ọ na-esikarị na-emepụta ihe ndị dị na ya. Tourmaline nwere akụkụ atọ nke prisms, ọ dịghị ọzọ ịnweta nkịtị nwere akụkụ atọ. Prisms na-enwe mgbe ọ na-enwe mgbatị dị arọ nke na-emepụta mmetụta nke triangular.
N'ikpeazụ, tourmaline anaghị adịkarị mma. Naanị ihe dị iche iche bụ nke ọma nke Yinnietharra, nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ Australia. Kristal nile nke hemimorphic bụ piezoelectric, na mgbe ụfọdụkwa pyroelectric.
Ihu anya anya
N'ọmụmụ ihe, nyocha, nkwurịta okwu ma ọ bụ pusi anya, ọ bụ mmetụta ngosi gosipụtara anya na ụfọdụ nkume. Site na French "uzo nke nkata", nke pụtara "anya nkịta", nkwurịta okwu na-esite ma ọ bụ site n'usoro ụbụrụ nke ihe onwunwe, dịka nlegharị tourmaline, ma ọ bụ site na fibrous inclusions ma ọ bụ cavities n'ime nkume, dị ka anya cat chrysoberyl. Ihe ndị na-eme ka ndị mmadụ na-akparịta ụka na chrysoberyl bụ ihe ndị na-eme ka ịnweta mmiri, bụ nke a na-edekarị nke titanium dioxide. Ihe nchoputa a na-enyocha amaghi ihe omuma nke tubes ma o bu ihe eji eme ihe. Akwukwo a na-eme ka ha kwado kwekorita anya na anya nke anya. Ngwunye nke nkedo nke nkedo ahụ bụ otu n'ime atọ axis kokophombic nke chrysoberyl, n'ihi ngbanwe na nhazi ahụ.
Ọdịdị ahụ yiri nchapụta nke silk spool. Ogologo ìhè nke ìhè na-enwupụta ìhè na-adị mgbe niile maka ntụziaka nke eriri. Maka nnukwu nkume iji gosipụta mmetụta a kachasị mma, a ghaghị ịkpụ ya na cabochon, nke nwere isi ihe dị elu kama iji ya mee ihe, ya na eriri ma ọ bụ ihe owuwu na-emepụta ihe dịka isi nke gọọmenti gwụchara. Ihe kachasị mma egosipụtara ọhụụ ìhè nke na-agafe nkume mgbe ọ na-agbagharị. Nkume ndị mara mma nke àgwà dị ala na-egosipụta nkwalite ụda dịka ọ dị iche iche quartz. Nkume ndị a na-atụghị anya na-egosi mmetụta ahụ nke ọma.
Anya nnụnụ catmaline si Brazil
Anya cat topaz
Tags Cat anya, Topaz
Cat anya anya kornerupine
Tags Cat anya, Kornerupine
Anya anụ anya danburite
Tags Cat anya, Danburite